Ukuphonononga isithethi sezaMandla eSistem 5 | Iindaba zeGajethi
URafa Rodríguez Ballesteros | | Izithethi, elektroniki, Reviews
Namhlanje sikuzisa uhlolo olunomdla kakhulu. Sivavanye iintsuku ezimbalwa enye yezona zinto zithandwayo ekhaya. un isithethi esikrelekrele esihambelana ne-AlexaNgokukodwa Isithethi seMandla eSistim 5. Kwaye amava anelise kakhulu.
Sibona njani amakhaya ethu, ngezixhobo zethu, ziya ziba zezala maxesha. Sele sinezixhobo zokucoca esinokuzilawula nge-smartphone, ezinje ngezicocekile zokucoca. Ungasathethi ke ngamaqonga okusasaza esiwasebenzisayo, kunye okanye ngaphandle kweefowuni eziphathwayo, kwiiTV zethu.
1 I-Alexa kwinkonzo yethu kunye noSomlomo weSmart 5
2 Uyilo olulula nolwanamhlanje
3 Isithethi esilumkileyo 5 kwiindawo ezithile
4 Iimpawu zobuchwephesha kwisithethi esi-smart Sistem 5
5 Isithethi esiSmart 5 itafile yokubalula yobugcisa
I-Alexa kwinkonzo yethu kunye noSomlomo weSmart 5
Enkosi kwizixhobo ezinje ngeSistem ye-Energy Sistem, kwinkonzo yethu sinokuba nomnye wabancedisi belizwi abadumileyo. Alexa, umncedisi welizwi owenziwe nguAmandla onke eAmazon uya kusinceda kwimisebenzi yethu yemihla ngemihla.
Yonke ingcaciso kwinkonzo yethu ngokukhankanya igama lakho. Umncedisi okrelekrele oya kusinceda ukuba ulwazi olufunayo kwangoko ngokubuza nje. Iresiphi, ukufunda umyalezo, uqikelelo lwemozulu, yonke into esinokuyicinga, buza nje aphendule. Ngaphezulu kokuba ucinga, kwaye Apha ungayifaka kwiAmazon ngokuthumela simahla.
Isithethi esihlakaniphile 5 isithethi esihlakaniphile siza kugubungela umsantsa kwintengiso apho abenzi abambalwa baye babanesibindi. Ngaphandle kwezithethi zeAmazon, asifumananga ezinye iindlela ezininzi zokuqwalaselwa. Kwaye iSistem saMandla seSistem esinikezela ngesithethi umgangatho wesandi, unxibelelwano oluhle kunye noyilo kwaye ugqibile ukutshatisa kuyo nayiphi na ikona yendlu.
Ezona zixhobo “zidityanisiweyo” unazo ekhaya eluncedo kakhulu uyakuba nesi sithethi sikrelekrele. Kumakhaya aqhelekileyo, ukufika kwezinto ezizenzekelayo ekhaya kuhamba kancinci. Nangona sibulela kwizibane ze-smart, i-smart tv, kwaye kunjalo, kwii-smartphones zethu, kancinci kancinci amakhaya ethu akrelekrele. Enkosi kwisithethi esi-5, ngaphezu kokukwazi ukumamela iindaba okanye ukwazi uqikelelo lwemozulu Singanika iiodolo ngokuthe ngqo kwi-Alexa. Bphantsi ukukhanya kokukhanya, vula okanye ucime iTV, okanye ubeke ii ubushushu begumbi ngo 25º.
Njengoko sisitsho, ngokuxhomekeke kwizixhobo ezinonxibelelwano lwe-intanethi esinazo, isithethi sethu esihlakaniphile siya kuba luncedo ngakumbi. Ke ngoko, Amava okusetyenziswa aya kuxhomekeka kakhulu kwimeko nganye. Nangona sinokuthi ukuba nesithethi kuphela esidlala umculo wethu, kunye nokuba ne-Alexa ikhona kuyo nayiphi na imibuzo sele ilungile.
Uyilo olulula nolwanamhlanje
Enye yezona ziphambili Uyabetha ezazikho ekuqaleni kwizithethi zeAmazon ngokuchanekileyo uyilo. Uyilo olungakhathaliyo olunemigca engacacanga kunye nemibala kunye nezinto ezimbalwa ezinokwenzeka. Nokuba iimodeli ezintsha ziyaqhubeka nokugcina umbala omnyama kunye nobume be-cylindrical ngemigca esisiseko.
I-Energy Sistem iyitshintsha ngokupheleleyo le ngcamango Isithethi esinengcwangu nesithethi esikrelekrele 5. Nge imilo yesikwere kunye nee-shades ezikhanyayo yenza i-Alexa ukuba ilunge ngakumbi nasiphi na isitayile sasekhaya. Ngolwakhiwo ngaphakathi izinto ezisemgangathweni, kunye nokugqitywa ngemibala eluhlaza okwesibhakabhaka kwisithethi kunye neplastiki emhlophe, ihamba kakuhle kakhulu ngokubona.
Olunye lweempawu ezibonakalayo zolu hlobo lwesithethi, ukuba sizithelekisa nezo sisebenzisa ukudlala umculo kuphela, sisikhundla sabo. Sifumana ulawulo oluphezulu kwaye oku ime nkqo etafileni okanye eshalofini Ukubonelela ngesandi esisijikelezileyo efikelela ngcono nakweyiphi na indawo yegumbi apho ikhoyo. Ukuba yile nto ubuyikhangela yithenge ngoku kwiAmazon ngaphandle kwentlawulo yokuthumela.
Isithethi esilumkileyo 5 kwiindawo ezithile
Ke siyabona phezulu kumaqhosha olawulo lokudlala kunye nokunye okuninzi. Emazantsi sifumana iqhosha lokutyhala "ukucela" i-Alexa. Iqhosha ekufuneka silicinezele kuphela xa sinokuthi sithule ii-microphone. Embindini sineqhosha lokucima / ukucima elisebenza njengokudlala / ukunqumama.
Kwibhokisi enye sinayo ivolumu phezulu nasezantsi amaqhosha. Ezi ziya kusebenza nokudlula iingoma phambili okanye ngasemva. Iqhosha ukufikelela kwifayile imenyu Yoqwalaselo. Kwaye okokugqibela iqhosha elinento eluncedo enomdla, ukuya Thula umboko. Ngeli qhosha lisebenza, isibane esibomvu se-LED siza kulayita kwisithethi. Kwaye isithethi asizukusiva ukuba sibiza i-Alexa.
Ngaphezulu kwamaqhosha kukho ii-microphone ezimbini ze-omni. Simele sitsho ukuba simangaliswe nguwe ubuntununtunu obugqwesileyo. Uyasimamela kwaye aye kuthi ukuba sithetha i-Alexa phantse naphi na egumbini. Nokuba kukude kangakanani kunokuba bekulindelwe.
Umzimba wakho uphela uhambelana. Ibe iziphelo zekona eziringiweyo apho isithethi somnatha singena ngokungenamthungo kwisakhelo sayo seplastikhi emnyama. Emuva kwayo sifumana igalelo lamandla kunye nezibuko lonxibelelwano oluncedisayo lwesinxibelelanisi sejack mini. USomlomo weSmart 5 ukukunika okuninzi, yifumane ngoku kwiAmazon.
Iimpawu zobuchwephesha kwisithethi esi-smart Sistem 5
Ukuba sijonga kwiimpawu zobugcisa esi sinikwa sesi sithethi, siyafumanisa iinyani ezinomdla kunye namanani. Isithethi esili-5 sinayo Isandi sestiriyo esiyi-2.0 kwaye nge amandla ngaphezulu kokundilisekileyo ukusuka kwi-16W. Musa ukulindela ukuba isithethi esinamandla sive umculo ongxolayo kwiindawo ezivulekileyo. Kodwa kumagumbi okulala okanye kwigumbi lokuhlala ibonelela nge crisp, isandi esicacileyo kunye nenqanaba elaneleyo levolumu.
La Unxibelelwano lweBluetooth Inayo iakhawunti iklasi ye-2, osebenza no 2.4 Ghz rhoqo kunye kunye ukuya kuthi ga kwi-20 yeemitha ububanzi. Ukongeza kwi-wifi yokunxibelelana ngaphandle kwamacingo okanye ibluetooth sinokuqhagamshela isixhobo kuyo Igalelo le-jack eyi-3.5mm. Ukwaqaqambisa ifayile ye- uqhagamshelo ibonelela ngantoni kunye nezithethi ezininzi zosapho lwe-Energy Sistem Ukusuka apho sinokonwabela i-Alexa.
Thenga apha iSistem yaMandla eSomlomo eSomlomo 5 ngokuhambisa simahla kwiAmazon
Amagqabantshintshi a ibhokisi ye-acoustic eyakhiwe ngomthi enikezela ubushushu kunye nomgangatho wesandi kwisithethi esihlakaniphile 5. Kwaye iarc yokukhanya kwe-LED ejikeleze yonke indawo ephezulu kwaye etshintsha umbala ngokokuyalela esikunikayo okanye ilizwe elikuyo. Ukufakwa kunye nokusetyenziswa kwenziwa lula ngokulula Isicelo esizinikeleyo nesikhethekileyo Enkosi ngexeshana elifutshane kakhulu oya kuba nakho ukusebenzisa isithethi ngokupheleleyo.
Amandla eMultiroom iWi-Fi
Umthuthukisi: Inkqubo yamandla
Isithethi esiSmart 5 itafile yokubalula yobugcisa
Umzekelo isithethi esilumkileyo 5
Inkqubo yesandi U-Estero 2.0
Potencia Izithethi ezingama-16W -2 ze-8W-
Iifowuni 2 ye-omni yesikhokelo
Conectividad I-WIFI-iBluetooth-Aux jack 3.5 mm
Ukusebenza rhoqo 2.4 GHz
Fi kelela ukuya kuthi ga kwi-20 yeemitha
Ubukhulu 112 x 112 x 211
U bunzima 1.260 kg
Ixabiso 99.88 €
Ikhonkco lokuthenga Inkqubo yaMandla eSomlomo eSomlomo 5
Uyilo olucekeceke nolwanamhlanje
Amandla asezantsi omculo ongaphandle
Inkqubo yaMandla eSomlomo eSomlomo 5
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » Ukuphonononga isithethi esisebenzisa amandla eSistem 5